Murtii Rabbin kee Sif Murteesse Fidhachuu hin didin – Site Title
Murtii Rabbin kee Sif Murteesse Fidhachuu hin didin
Posted byabdiaminbakar 11th Jul 2021 Posted inUncategorized
Kan Rabbin siif kenne kee ta’uu Rabbi si haa beeysisu. Qalbii fi ija tee tan namaatti qabuu sirraa haa hambisu, ija tee tan namoota deemu hundaf bolotee imaana qabde tana dhuga itti himii, amansiisi dhorki.
Yoo amansiisuu dandeeyse mormi, yoo amanuu hin dandeenye moramuutti hin cichin. Maqaa kee caalaa maqaa haadhaaf abbaa keetiitiif ulfina kenni. Eenyummaa gammachuun fidee gaddi hin balleessu. Tan gammachuun fiddee gaddi balleeysitu duraanuu eenyummaa sirriitii miti.
Miseensa maatii fi saba irraa dhalattee hin jibbin. Rabbiin waan isaan siif uumee fi isaaniif si uumeef qaba. Rabbiin akkas godhuu isaatti yoo mufatte, du’aa fi jireenya keeysattiis gaddaa taatee hafta.
Waan hin beeyne bari, tan beeytu barsiisi. Osoo gorsi kee namoota baay’ee fayyadaa jiruu kan si gorsu yoo dhufe fudhachuu hin didin. Namni Rabbiin sirra waa beeysise akka jiru amani.
Goota waan taateef halkan deemuu hin guddisin, sodaataa waan taateef guyyaa bobbaatee hoojjachuu hin dhiisin.
Murtii Rabbin sif muree Fudhachu hin didin